Sawiro: Sidee ayey u dhacday Xafladdii uu Farmaajo maanta xilka kula wareegay ? | Dayniile.com
Sawiro: Sidee ayey u dhacday Xafladdii uu Farmaajo maanta xilka kula wareegay ?
Feb. 16 WARKA MAANTA Comments Off on Sawiro: Sidee ayey u dhacday Xafladdii uu Farmaajo maanta xilka kula wareegay ?
Muqdisho (Deyniile Media)- Wixii la sogoba asbuuc kadib madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ayaa maanta oo Khamiis ah 16-ka Bishan February si rasmi ah ula wareegay Xafiiska shaqada Villa Somaliya.
Farmaajo ayaa dhawaanahaan ku shaqeenayey xarun kumeel gaar aheyd oo uu ku lahaa Hotel Jazeera oo u dhaw garoonka diyaaradaha Aadan Caddde International Airport.
Xil wareejintaas ayaa dhacday kadib markii xaflad kooban oo si fiican loo soo agaasimay lagu qabtay Xarunta Villa Somaliya waxaana halkaas gacanta isku qaaday Madaxweyne Farmaajo oo xilka la wareegayey iyo Madaxweynihii hore ee Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka wareejinayey.
Qalab kala duwan oo isugu jiray Dahab iyo Qallin oo intii Madaxweyne Xasan uu taliska haayey hadiyado kala duwan loogu keenay magaca Qaranka Somaliya ayaa la dhigay Xafiiska Shaqada Madaxweynaha cusub.
” Waxaan ku faraxsanahay inaan maanta xilka qaranka Soomaaliya ku wareejiyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana Soomaaliya u baryey waa cusub waxaana la rajeenayaa inuu dalka horey usii socdo” ayuu yiri Mudane Xasan Shiikh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub, ayaa mahad celin kadib waxa uu madasha ka sheegay in dowladdan ay tahay tii shacabka Somaliyed ay doonayeen, wuxuuna bulshada ugu baaqay inay kala shaqeeyaan dowladiisa, suggida amniga iyo horumarinta dalka.
Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta ku shaqo bilaabo Villa Somaliya, islamarkaana uu rajeynaayo hanaanka dowladnimo ee dalka dadka oo dhan inay ka wada qayb qaataan.
← Xog: Halkee ayuu Xasan Sheekh ku noolaan doonaa xil wareejinta kadib?
DEG DEG: Hoobiyayaal lagu weeraray Villa Somalia xili ay munaasabad ka socto →